फूलमा बाँके आत्मनिर्भर
दैनिक अनलाइन | कात्तिक ९, २०७६ शनिबार | 0
काठमाडौँ । सयपत्री तथा मखमली फूलमा बाँके आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। यसैले अहिलेको तिहारमा जिल्लामा भारतीय फूल नभित्रिने भएको छ। बाँके तथा आसपासका जिल्लामा उत्पादन भएका फूल पर्याप्त भएपछि भारतबाट सयपत्री र मखमली फूल नल्याउने भएको व्यवसायी बताउँछन्।
नेपालगञ्जस्थित हिमाली नर्सरीले मात्र झण्डै पाँच क्विन्टल सयपत्री फूल बजारमा पठाउने भएको नर्सरीका सञ्चालक अङ्कित श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। उहाँकाअनुसार दाङ, सुर्खेत, प्युठानका फूल व्यवसायीले अहिलेसम्म दुई क्विन्टल फूलको माग गरिसकेका छन्। यहाँ उत्पादन भएका सयपत्री फूल भारतको भन्दा गुणस्तरीय छन्। प्रतिकिलो रु ४०० का दरले सयपत्री फूल बिक्री हुँदै आएको पुष्प व्यवसायी बिन्दु चर्तीमगर बताउनुहुन्छ।
दुई हजार सयपत्री र दुई हजार मखमली फूलका माला बिक्री गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “तिहारमा झण्डै रु १६ लाखको फूलका माला बिक्री गर्ने मेरो लक्ष्य छ।” कोहलपुर, दाङ र पाल्पाबाट फूलको माग रहेको चर्ती फ्लोराकी सञ्चालकसमेत रहनुभएकी चर्तीमगरले बताउनुभयो।
पछिल्लो समय यहाँ मखमली तथा सयपत्री फूलको खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ। सभा समारोह, जन्मदिन, विवाह, पूजाआजा, व्रतबन्ध, भोजलगायतमा फूल प्रयोग हुने गरेको छ। होटल, कार्यालय, पसलमा समेत फूल प्रयोग हुन थालिएपछि अहिले फूलको माग बढेको व्यवसायी चर्तीमगर बताउनुहुन्छ।
“तिहारमा धेरै माग हुने सयपत्री, मखमली, सुपारीलगायतका फूल बाँकेमै उत्पादन भएका छन्, जसले गर्दा भारतीय फूल विस्थापित भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो। आधुनिकतासँगै प्राकृतिक फूल र वातावरणमैत्री सामान प्रयोग हुन थालेका उहाँको भनाइ छ। फूल उत्पादक व्यवसायीले पनि फूलको माग बढ्दै गएको बताएका छन्। सबैभन्दा बढी सयपत्री तथा मखमली फूलको कारोबार हुने व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपालगञ्ज नाकाबाट मखमली र सयपत्री फूल अहिलेसम्म नआएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शान्तिराम निरौलाले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज नाकाबाट आर्टिफिसियल (कृत्रिम) माला आए पनि सयपत्री र मखमली फूल आएको तथ्याङ्क भन्सार कार्यालयसँग नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रु चार लाख ५६ हजार ६९४ र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु पाँच लाख ८९ हजार ८३३ बराबर प्लास्टिकका कृत्रिम माला नेपाल भित्रिएका थिए।
गौतम गम्भीरले कोरोना कोषलाई दिए आफ्नो दुई वर्षको तलब
बझाङ केन्द्र भएर भूकम्प
हावामा मुक्का चलाउने धृष्टता गरियो : प्रेस सल्लाहकार थापा
८४ ब्यन्जन नपचेर भुँडी फुट्ने नेता भन्दा पुर्ब राजा प्यारो : ज्ञानेन्द्र शाहलाई पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको चिट्ठी
लकडाउनमा प्रश्रवको पीडाले छटपटाइरहेकी महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा
चीनमा फेरि फैलिन थाल्यो कोरोना भाइरस
चैत १९, २०७६ बुधबार दैनिक अनलाइन
अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वकै सबैभन्दा बढीको मृत्यु
गोरखपुरमा कोरोनाले लियो २५ वर्षीय युवकको ज्यान
के एसईई परीक्षाको नयाँ मिति तोकिएको हो ?
कहिलेबाट कम हुन्छ कोरोना भाइरसको महामारी ? वैज्ञानिकले गरे यस्तो दाबी
चैत २०, २०७६ बिहिबार दैनिक अनलाइन
बाजुरामा एकै पटक ३०० परिवार ज्वरो र रुघाखोकीले थलिए
चैत १९, २०७६ बुधबार रासस